तपाईलाई धनि बन्ने रहर छ ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् ! केहि वर्षमै मालामाल, तरिका यस्तो छ – mero sathi tv
तपाईलाई धनि बन्ने रहर छ ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् ! केहि वर्षमै मालामाल, तरिका यस्तो छ
On ३० कार्तिक २०७४, बिहीबार १७:३४
धेरै पैसा कमाएर धनी बन्ने रहर अधिकांशलाई हुन्छ । तर, चाहदा चाहदै पनि अधिकांशको त्यो रहर पुरा हुन सकेको हुदैन । धनी बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाइंसँग बचत गर्ने चाहाना हुनुपर्छ ।
हुनत पैसा जोगाउने र बचत गर्ने चाहना अधिकांशमा हुन्छ । तर, चाहँदा चाहँदै पनि सबैले पैसा जोगाउन सकिरहेका हुदैनन् । साँच्चै पैसा बचत गरी सही ठाउँमा उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यी उपायहरु पयोगी हुन सक्छन ।
जबसम्म खर्च घटाउनु हुन्न तबसम्म बचत हुन सक्दैन । त्यसैले आफ्ना खर्चका शीर्षकहरू केलाउनु होस् । ती मध्ये कुन बढी र कुन कम महत्वपूर्ण हुन् छुट्टयाउनुहोस् । त्यसको आधारमा पैसा खर्च गर्नुहोस् । अफिसका साथीहरूसँगै खाजा खान जाने गर्नुहुन्छ भने ‘गोइङ् टुगेदर, पेईङ् सेपरेट’(सँगै खाने तर अलग–अलग तिर्ने) बानी बसाल्नु होस् ।
सबै साथीहरूको बिल आज तपाईले तिर्ने र भोलि अर्काले तिर्नु नराम्रो त होईन । तर, सबै साथीहरूको स्वभाव एकै प्रकारका हुँदैनन् । आफ्नो पालोमा उनीहरूले पैसा नर्तिन विभिन्न बाहना गर्न सक्छन् । यस्तो स्थितीमा तपाईको मात्र खर्च बढी हुन सक्छ । आज साथीले खाएको खाजाको पैसा नतिर्दा भोलीलाई तपाईको खाजाको लागि पैसा बचत भईरहेको हुन्छ ।
के तपाईको तलब बढेको छ ? पदोन्नती भएको छ ? कुनै खुशीको दिन हो ? यस्तो बेलामा सतर्क हुनुहोस । साथीहरूबाट शुभकामनाका साथै भोजभतेरको आग्रह पनि आउन सक्छ । साथीहरूले भनेकै भरमा अनावश्यक खर्च गर्दा तपाईको पैसा धेरै खर्च हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो वास्तविक धरातल नबिर्सनुहोस । आवश्यक ठानेमा मात्र उचित पैसा खर्च गर्नुहोस । यस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुने पैसालाई बचत गर्न सकेमा भविष्यमा ठूलो आर्थिक समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ।
श्रीमान–श्रीमती र साना छोराछोरीसँगै किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने बिचार पुर्‍याउनु होस् । तपाईंका छोराछोरीले बजारमा देखिने आकर्षक सबै वस्तु किन्न जिद्धी गर्न सक्छन् ।
उनीहरूको माग अनुसार किनमेल गर्दा धेरै खर्च हुन सक्छ । तपाईका बाल–बच्चा र श्रीमान–श्रीमतीको बढी ढिपी गर्ने बानी छ ? हो भने, किनमेलमा जाँदा उनीहरूलाईसँगै नलैजानुहोस । उनीहरुका लागि पनि आवश्यकता अनुसार आफैले सामान खरिद गर्नुहोस ।
नियमित रुपमा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा खाना खाने बानी छ ? अव त्यसलाई कम गर्नुहोस । तपाईंले घरमै पनि राम्रा परिकार बनाएर खान सक्नुहुन्छ । घर बाहिर खानाका लागि जति खर्च लाग्छ । त्यसले तपाईको सम्पूर्ण परिवारलाई खान खुवाउन पुगेर पनि बचत हुन सक्छ । बाहिरको खानाको तुलनामा घरमै पकाएर खाँदा तपार्इंको स्वास्थ्य बिग्रने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसले स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि कम हुन्छ ।
दुवइ (UAE) बाट आयो ३ करोड नेपालीहरुको लागि खुसिको खवर । अमर बम लाई छुटाइन राष्ट्पतिले । भिडियो सहित !!